ငရမန်ကန်း အမှန်တရား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ငရမန်ကန်း အမှန်တရား
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Aug 4, 2013 in Creative Writing, Think Different | 37 comments
ဖတ်​လို့ အရမ်း​ကောင်းပါတယ်​ခင်​ဗျား …။ဘိုးငယ်​တို့ကို စိတ်​ဝင်​စား​နေမိပါပြီ ဆက်​​ရေး​ပေးပါဦး ။
ဂလို လာအားပေးတွားဒယ် ကျေးဇူးကမ္ဘာဘာဘဲ ခီညော် ….
ဟိုအကြောင်းကို အလျဉ်းသင့်ရင် ဆက်ရေးတွားဘာ့မယ် ခီညော် …
သန်းကျူး ရှဲရှဲ သာဒု ဘာတော် .. အဲ .. ရှင် .. အာ … ဗျာ …
ရွာထဲ ရဲအစစ်တွေ ရှိဒါဂို
ကျုပ်တောင် သိဘူးးးး ဟူးဟူး
တစ်ဖက်ထဲ ကြည့် ပြောနေကြရင်တော့
ကျုပ်ကတော့ ကြားမှာပဲ နေတယ်
ကဲ ဘာပြောချင်သလဲ :D
သံချွန်တွေ သံဆူးတွေ တပ်ထားတတ်တယ် ၊၊၊၊၊၊
ဒီတော့ကာ ၊၊၊၊၊၊၊၊ အဟမ်းးးးး
နင်က ခွထိုင်တယ် ဆိုတော့ကာ ၊၊၊၊၊၊ အဟမ်းးးး
စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့ ၊၊၊၊၊
သံချွန်တွေ တပ်ထားရင်တော့ ဘယ် ခွထိုင်မလဲ
ဘေးထိုင်ပြီး ဘုပဲ ပြောသပေါ့
နင် စိတ်ချမ်းသာရင် ကမ်ဘာဂျီး အေးချမ်းဘာဒယ် ၊၊၊၊၊၊
သာဒု ၊၊၊၊ သာဒု ၊၊၊၊၊
ဘုရင်ကို ဖမ်းပြီး အကျဉ်းချဝံ့သူ
ငရန်မန်ကန်းကြီးအား တအားဂုဏ်ပြု မိတော့ …………
အဲဒါ မှား သတဲ့လား …
အရီး ပေါဒါ …
ဂုလို တား ပို့စ်လေးမှာ မန့်တွားဒါ …
သာဒု .. သာဒု ဘာ အရီးရာ ….
ငရမန်ကန်း နာမည် ကြားလို့ “မှားတဲ့ ဘက်မှာ” သီချင်းညည်း သွားတာ။
နာလဲ သိဘူး .. ဒဲ့ဂျာ …
အိုက်ဒါဆိုဒေါ့လည်း တားလည်း သိဘူးလို့ဘဲ မှတ်ပလိုက်ဘီဂျာ …
အရီးဒို့ဂဒေါ့ ဂယ်ဘဲ …
ဒါ့ထက် .. အရီး (လတ်) က ဘယ်ပျောက်တွားဒဒုံးဟင်င်င် ….
ဟို ပန်းချီဆြာ က အရီးခင် ခေါ်တာ သဘောကျသွားလို့။
ပိုပြီး ရွာဆန် သလားလို့။
တယ်လည်း ရွာဆန်ချင်လှသကိုး ….
မြို့ဂျီးပြဂျီးမှာဆိုဒေါ့ ရွာရဲ့ အငွေ့အသက်တွေကို တစ်ခါတစ်ခါ တမ်းတမိလေမပေါ့ … (ရမ်းတုတ်)
ဒါမှ မဟုတ် … ဂဇက်ရွာ ဆိုဒါကို ကိုယ်စားပြုမယ် ဆိုရင်ဒေါ့ဖြင့် …
အဟမ်းး ဂဇက်မြို့ ဖြစ်နေဘီနော် … လို့ …. (ဒိတ်မအောက်ဖို့)
အခု ဂဇက် က ရမ်းရမ်း လွှတ်မြန်နေလို့ မြို့ဖြစ်နေဘီလို့ ပေါဒါ ….
ဖွဘုတ်နဲ့ ဂူဂဲလ်တောင် ဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက် ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဂဇက်က ဖလန်းဖလန်းကို ထနေတော့တာပဲ …
ဒါနဲ့ပဲ .. ကျုပ်လည်း ရွာထဲ ပတ်မွှေနေတော့သတည်း …။
အရီးတို့ အိမ်ရဲ့ ရှေ့မှာ မြက်ခင်းကျယ်ရှိတယ်။ မြင်းတွေ ရှိတယ်။ သစ်ပင်အုပ်ရှိတယ်။
ညဖက် လူသွားလမ်းကျဉ်းလေးပေါ်က လမ်းမီးရောင်နီပြပြ လေး နဲ့ မို့ အဖွားမြို့ လေး ကို အမြဲ အမှတ်ရပါတယ်။
လှယဉ်နဲ့ ညတင်ကို ခွရင် ကြွဖင်ဖို့ မမေ့နဲ့ ထဆင်ထူး..။
အမငေးးး တဲ့ …။
အမှန်ဗျာ … ဆိုတော့ …
အန်တယ်ဂျီး ကိုယ်ဒွေ့များ ချိနေမလားဘဲ …
ချိရင်လည်း နှောင်းလူဒွေ၊ မတိသေးဒူဒွေ တိရအောင်
နီးနီးပါးပါး လှစ်ပြဘာလား ခီညာ ….
သာဒု ဘာ ….
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်မ သည်….
မင်းသိင်္ခ နဲ့ .. ဂျူး. ..
နာ နီ့ကို ပြောဖူးတယ်နော် ။
ငါက ဂျူး သိပ်မဖတ်ဒေါ့ ဂျူးရေးဟန်ကို သိပ်မသိဘူးဟဲ့ …
ဂျူးရေးဟန် လေသံဖမ်းမိနေသူက ကူဖေးလို့ မ မယ် ဆိုရင်ဖြင့် …
နင် ပေါဒလို ရေးဖစ်လိမ့်မယ် … ထင်ဘာဒယ် …
ဒါမယ့် … စာရေးရမှာ ပျင်းစ်စ်နေဒယ်ဂွယ် ….
ခုတောင် အစက ဝတ္ထုရှည် ရေးမို့ဟာ ပျင်းစ်စ်သွားလို့ လမ်းဂျောင်း ပြောင်းလိုက်ဒါ … ဟီးးဟီးးး
မိန်းမတစ်ယောက် ၏ ရတနာသိုက် ရှာပုံတော်…
ကျွန်မ ၏ ဖျစ်ချင်တာဖျစ် မောင်ဘချစ်…
ပုန်နား ကျွန်မ ကွန်း
နီတို့ …ပေါင်းစပ်ရေး လိုက်လို့ ကတော့…
မပြည့်စုံတဲ့ အမှန်တရားကို အမှန်လို့ တထစ်ချ မယူဆနိုင်ဘူး…
အချင်းအရာတစ်ခု ပြည့်စုံတယ်လို့ တထစ်ချမပြောနိုင်တာလဲ အမှန်ပဲ….
တထစ်ချပြောနိုင်တဲ့ အမှန်တရားမတွေ့ရှိရင် ပြည့်စုံတယ်လို့ မပြောနိုင်ပြန်ဘူး…
အစက ပြန်စပေါဂျာ …
ကျုပ်ကတော့ အမှန်တရားဟာ အမှန်တရားလို့ပဲ ထင်ဒယ်ဂျ …
အိုက်ဒီ အမှန်တရား အပေါ် မြင်တဲ့ အမြင်တွေကိုက ငရမန်ကန်း ဖြစ်နေဒါ …
ဘာဘဲ ပြောပြော ကိုရီးယားစတိုင်လ် ကျောပိုးတာတို့ထမ်းတာတို့ က “ ငရမန်ကန်း ”က စခဲ့တာ…။
မြန်မာ့ကျောပိုးနည်း ကမ္ဘာကို လွှမ်းရမည်..။
ကျောပိုးနည်းကို စတင်ဒူဟာ ငရမန်ကန်းဂျီးပေါ့ …
ဒါဖြင့် .. ဟိုသီချင်း .. ဘာတဲ့ ..
ငယ်အခါ တို့ဘပိုး .. ကြီးလာတော့ သူညားပိုး .. ဆိုဒဲ့ သီချင်းဟာ …
ငရမန်ကန်းဂျီးနဲ့ တစ်နည်းတစ်ဖုံတော့ ပတ်သက်မှု ရှိလိမ့်မယ် ထင်ဒယ် ….
မောင်အံ… လှယဉ် နဲ့ ညတင် ကိုအသာထား…
ခင်ဗျားရေးတဲ့ ငရမန်ကန်း ဆိုတာ “ရာမန်ခန်း”တဲ့…
စစ်သူကြီး မဟာဗန္ဓုလ က “အဗ္ဗဒူလာ”တဲ့…
ကျောက်စ် ပြောတာမဟုတ်၊ ဝီကီထဲက “မြန်မာ့ အစ္စလာမ် သမိုင်း” မှာ ရေးထားတာ…
သဂျီးမှ ဝီကီ ကို ကိုးကွယ်သလား မှတ်နေဒါ …
ဥငေးလည်း ဝီကီ သုံးဒတ်ဘာဘဲလား …
လဂါး စဒါ …
ဂုလို လာအားပေးတွားဒါ သာဒု ဘာ ဥငေးရေ …
ဆိုတော့… မျက်မှန်ထူနှင့် လူကြီးရယ်.. ကတုံး ပြောင်နှင့် လူကြီးရယ်.. လမ်းမေးတဲ့လူရွယ်ရယ်မဲခွဲပေါ့…
အခြေခံအားဖြင့်.. လမ်းမေးတဲ့လူက အဆုံးအဖြတ်နေရာကျနေတာမို့.. သူလုပ်တာအမှန်ဖြစ်သွားပါကြောင်း…
.. လို့ ပြောရင် လွဲဦးမယ် …
သူလုပ်တာ .. ဖြစ်သင့်တယ် ဖြစ်သွားပါကြောင်း …
.. လို့ ပြောတာက ပိုကောင်းမယ် ထင်ဘာဒယ် ခည …
ဘာပုလို့ဒုန်း ဆိုဒေါ့ …
သူ ကိုယ်တိုင် အမှား၊ အမှန် ဝေခွဲ မရ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စမှာ ..
အမှားကို ရွေးချယ်မိရင် မှားနိုင်ပါသေးတယ် …
အမှန်တရား ဆိုတာ ကိုယ့် ဘက် သူ့ ဘက်အယူအဆ အမြင်နဲ့ လည်းဆိုင်တယ်ပြောကြတယ်။
အကျိုးနဲ့ အကြောင်း ကိုယ့်ဘက်က ဆီလျော်ရင်ကို ကိုယ့် အမှန်တရားပေါ့။
ကိစ္စတစ်ခုမှာ အမှန်တရား တစ်ခုပဲ ရှိတယ်လို့လည်း ပြောကြတယ်။
ဒါဆိုရင်ရော ဘယ်အရာမျိုးက အမှန်တရားဖြစ်နိုင်မလဲ။
အမှန်တရားက ဖိနပ်စီးနေတုန်း အမှားက ကဘာပတ်ပြီးပြီလို့လည်း ကြားဖူးတော့ ကိုယ်တွေ့တာ အမှားကြီးဖြစ်မှာလည်း ကြောက်ရသေးးးးး
အမှန်တရား ဆိုတာ အမှားတစ်ရံ ဆိုတော့ကာ အမှန်နဲ့ အမှားဟာလည်း ကျောချင်းကပ်ရက်ပေါ့နော်။
နိ ရေးတာဖတ်ပြီး မူးသွားလို့ နိ မူးအောင် ပြန်ရေးတာ။
မမဂျီးဒွေဂ အဲ့ဂလောက်ထိ ဂျစ်ဂျဒါ …
အပေါ်က ဟာဒွေ ဖတ်ပီး .. အင်း .. အဲ .. ဖြစ်နေဒုန်း ..
အောက်က စာကို တွေ့လိုက်ရဒေါ့ …
ဟွန့် … ဆိုပီး ဖစ်တွားဒယ် ..
နာဂတော့ နီ အမှန်တရားလို့ရေးတိုင်း လန့်နေတယ်…
နီဂ ဒါမျိုးဒေလည်း ရေးဒယ်ပေါ့… သာဓု..
အရီးထင်တာ အမှန်တရားလား လုံမ နဲ့ မောင်အံ ????
အဟိ… ဖြေကြလေ၊ ဒီမှာ အရီးမေးနေတယ်…
အရီး ဆီကတော့ အောဝါဓ တွေ ထပ်လာတော့မယ် မှတ်။